सुवास नेम्वाङ सहित यी ५ नेताले छोडे ओलीको साथ्, गौतम संग मिल्ने संकेत ! - Prahar News
सुवास नेम्वाङ सहित यी ५ नेताले छोडे ओलीको साथ्, गौतम संग मिल्ने संकेत !
काठमाण्डौ - नेकपाको चर्किदो विवाद संगै यतिबेला नेकपाका नेताहरुले फरक फरक खालका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप मा व्यस्त छन।
एक पक्षले अर्का पक्षलाई आरोप लगाउने र खेमा परिवर्तन गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री निकट मानिएका केहि नेता भने ससद बिघटनको बिषयलाई लिएर मौन बसेका छन्।
ओली पक्षका दरिलो खम्बाका रुपमा हेरिएका तत्कालिन संबिधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगाएतका केहि नेता खुलेर ओलीको पक्षमा लागेका छैनन्।
सुवास नेम्वाङ, प्रदिप ज्ञवाली, लगाएतका केहि नेताहरुले संसद बिघटन संबैधानिक नहुने भन्दै आएका थिए तर पछिल्लो समय ज्ञवाली ओलीकै पक्षमा उभिए पनि नेम्वाङ भने त्यसको बिपक्षमा नै छ्न।
निकट श्रोतका अनुसार संसद पुनर्स्थापना नभएको अवस्थामा नैतिक दवाबका कारण सुवासचन्द्र नेम्वाङ ओलीखेमामा रहन नसक्ने पनि जनाएको छ। किन कि उनि तत्कालिन संबिधानसभाका अध्य्क्ष थिए।
त्यसैले पनि उनलाई नैतिक दबाब रहेको छ नेम्वाङ निकट श्रोतका अनुसार संसद पुनर्स्थापना नभएको अवस्थामा ओलिसमुहमा नलाग्ने र बामदेव संग मिलेर पार्टी एकताको पक्षमा अभियान चलाउने मनस्थिति बनाएको श्रोतको दाबि छ।
दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ ।
संविधानसभाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले संसद् विघटनको विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्दै उनको आलोचना पनि भएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत संसद् विघटन संविधानमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र असहयोग भएकाले ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।
बिहिवार, पौष २३ २०७७१०:४७:२८